I-Atari ikwajoyina i-retro kunye nefashoni encinci kunye neAtaribox | Iindaba zeGajethi
Ukwamkelwa kwe-Nostalgic, thatha iibhokisi zakho zethishu, yiza ubone, siza kuthetha ngomhlobo wakudala ohlaziyiweyo, iPhoenix evukile eluthuthwini. Uninzi lwenu belulindele, U-Atari ubuyile ngohlobo lwekhonsoli "encinci" ngokufanayo nabalingane bakaNintendo abaphumeleleyo ukwenza intsebenzo eninzi (yezemali kunye nentengiso) kwindlela esizivumela ukuba sihanjiswe ngumnqweno.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo u-Atari utyhile "i-teaser" encinci yesibini enokuba yeyiphi i-Atari Mini, namhlanje ekugqibeleni sityhila i-Ataribox, ikhonsoli ye-retro eya kukuvumela ukuba ubuyele ebuntwaneni bakho ngexesha elinye. Masibone ukuba i-Ataribox ifihla ntoni kwaye kutheni isenza amagqabi ehlabathi lonke ngaphandle kobukhulu bayo.
Ekugqibeleni bakubonile kufanelekile ukusinika ulwazi oluthe kratya, nangona ngokucacileyo alwanelanga. Kwaye khange basinike umhla wokumiliselwa okanye ixabiso, amathemba nje ambalwa okuba kuya kufuneka sibambelele kuwo ngamandla amakhulu ukuze singatshabalali kumzamo. Kuya kufuneka baqale iimodeli ezimbini, enye eyenziwe ngomthi igqityiwe njenge-Atari 2600 yakudala, kwaye enye inombala omnyama nobomvu kugqitywe ngeplastiki (njenge PlayStation 4 umzekelo) kwezona gamers zangoku, kunye nazo zonke iintlobo zamagumbi.
Le khonsoli iyakwamkela amakhadi e-SD kwaye ibala amazibuko amane e-USB ngaxeshanye eqhagamshela kwiTV ngokukhupha iHDMI njengoko yenza iNintendo Classic Mini umzekelo. Ngokwolwazi oluvela kuAtari, ikhonsoli inokuba neWiFi, nangona bengakhange bachaze ngqo ukuba ngawaphi amagama. U-Atari usiqinisekisile ukuba le yinto nje "yeelekese" ukuze sifumane umbono wento ezayo, ewe, kunzima kuthi ukuyibona ngaphambi kokuphela kuka-2017 okanye ekuqaleni kuka-2018, kodwa ngaphandle mathandabuzo siphambi kwesiphelo esichazayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UAtari ujoyina i-retro kunye nefashoni encinci kunye neAtaribox